I-China pp ibhokisi lokukhetha elingenalutho Umkhiqizi nomhlinzeki | Sihai
Kk ishidi lukathayela lisetshenziswa kakhulu ekukhangisweni, ishidi likashukela elisetshenzisiwe lokhetho lenziwe ngezifiso ukubonisa ukubonisa, ibhokisi lokhetho, i-rack rack, ibhodi lezimpawu, uphawu lokhetho neminye imikhiqizo yokhetho, kwenziwa ngezifiso ukwakheka nosayizi ohlukile ohlukile, ohlukile umbala, ukuphrinta okuhlukile kwephepha elingenalutho. Ukhetho lukathayela lukathayela luthunyelwa e-United States, Australia, New Zealand nakwamanye amazwe aseNtshonalanga okhethweni lukamongameli nobubusi kanye nokuvota ngentando yeningi.
Njalo ngonyaka, kukhiqizwa inani elikhulu lamabhodi ezikhangiso kanye nezixhaso zokhetho futhi kuthunyelwa yiShenzhen Sihai. Ziyini izinzuzo ze-pp eziyize ibhodi yokuvota yokubeka?
1. Indawo yokubeka ukhetho, nomsebenzi wokuvota wokhetho, ngezansi kwebhokisi lokuvota, ivoti lokuqoqa. Izinhlangothi neziqongqo zisetshenziselwa ukuphrinta nokukhangisa. Le rack rack isendaweni ngayinye nesifunda ukuqoqa abavoti bendawo.
2.adopt kp ipuleti elingenalutho ehambisana ne-European RoHS ejwayelekile yokuvikelwa kwemvelo, enezinzuzo zokuluhlaza, okukhanyayo futhi okulula, okuvuselelwa kabusha, njll.phepha elingenalutho lingelemikhiqizo e-clinker, ngakho-ke inezici zokungenwa kwamanzi nokungenamanzi, ukumelana nokugqwala kanye njalonjalo. Kungenza futhi ukuthi i-UV ivikelekile ekubonisweni kwangaphandle.
Langaphambilini pp ibhokisi elingenalutho lokukhangisa
Olandelayo: pp ibhokisi likathayela le-express